Xogta Tirakoobka Suuq-geynta 2019 | Martech Zone
Helitaanka aaladda saxda ah ee xayeysiinta ah oo aan kaliya gaarin dhagaystayaasha laakiin abuuraya xiriir lala yeesho daawadayaasha waa wax adag. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, suuqleydu waxay diiradda saareen arrintan, tijaabinta iyo maalgashiga habab kala duwan si loo arko midka ugu fiican. Oo qofna lama yaabin, suuq-geynta waxyaabaha ku jira ayaa qabtay kaalinta koowaad ee adduunka ee xayeysiinta.
Kuwo badan ayaa u maleynaya in suuqgeynta waxyaabaha ku saabsan ay jirtay oo kaliya dhowrkii sano ee la soo dhaafay tan iyo markii internetka uu caan ku noqday adduunka oo dhan fududeynta ganacsiga ugu dhaqsaha badan abid ee macluumaadka.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan eegno si dhow, waxaan dhab ahaantii arki karnaa in habka suuq-geynta waxyaabaha uu jiray illaa laga soo bilaabo qarnigii 19aad. Waxaa intaa dheer, waxay ka caawisay horumarka sii socda ee warshadaha kala duwan.
Waa tan waxaas:
Dhammaantood waxay bilaabmeen dhammaadkii qarnigii 19aad. Horumarka tikniyoolajiyadeed ee isgaarsiinta iyo gaadiidka ayaa ahaa isbadalkii ugu horreeyay ee ugu weynaa ee bulshada dhexdeeda taas oo u saamaxday shirkadaha inay xiriir adag la yeeshaan macaamiishooda. Tusaale wanaagsan oo ah sida tan ku timid waxaa laga soo qaadan karaa sanadkii 1885 oo ahayd goorta Furrow majalladu waxay siisay beeralayda macluumaad iyo talooyin ku saabsan sida loo horumariyo ganacsigooda. Markay ahayd 1912, waxay uruurisay in ka badan afar milyan oo akhristayaal joogto ah.
Tusaale kale wuxuu ka yimid shirkadda taayirka ee Faransiiska Michelinguiden, kaas oo soo saaray hage ka kooban 400 bog oo macluumaad siinaya darawalada ku saleysan talooyinka socdaalka iyo dayactirka baabuurta.
Xogta taariikhda ayaa muujineysa taas suuqgeynta waxyaabaha ku dhex maray isbeddel weyn oo wuxuu gaadhay heerkii ugu sarreeyay qiyaastii 1920 markii raadiyaha la hindisay. Iibsashada waqtiga hawada iyo maalgalinta barnaamijyada caanka ah waxay noqdeen habka ugu wanaagsan ee kor loogu qaado loona xayeysiiyo. Waxay u shaqeysay waxyaabo yaab leh ganacsatada suuqyada kuwaas oo isla markiiba garwaaqsaday awooddeeda waqtigaas.
Tusaalaha ugu wanaagsan ee isbeddelkan waxaa laga qaadan karaa shirkadda Oxydol Saabuunta budada, Kaas oo bilaabay inuu kafaalo qaado riwaayad taxane idaacadeed caan ah. Dhagaystayaasheeda bartilmaameedka ah ayaa si dhow loogu qeexay inay yihiin hooyooyinka guryaha, calaamaduhuna kaliya ma noqonin kuwo si weyn u guulaystay - iibkeedu cirka isku shareeray Tani waxay dejisay heerar cusub oo ka mid ah ciyaarta xayeysiinta, tan iyo markaas wixii ka dambeeyayna, waxyaabaha ayaa kaliya soo fiicnaaday.
Si dhakhso leh horay ugu socda ilaa maanta, suuqleyduna waxay diiradooda u wareejiyeen qaybinta dhijitaalka ah ee kumbuyuutarka, casriga, iyo internetka.
Hal shay ayaan isbeddelin, in kastoo:
Suuqgeynta waxyaabaha ayaa weli ah mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee xayeysiinta iyo xayeysiinta ah. Suuqleyda ayaa horumarinaya istiraatiijiyad cusub, waxyaabo cusub, iyo qaabab cusub oo lagula macaamilo dhagaystayaashooda oo la siiyo wax badan oo ay doonayaan. Warbaahinta bulshada iyo websaydhadu waxay noqonayaan bar-tilmaameedka cusub, maaddaama dadka da 'kasta ay adeegsadaan internetka, ma jiraan wax xaddidan oo kooxda ay noqonayaan bartilmaameedka xiga.
Way iska cadahay arintaas suuqgeynta waxyaabaha ayaa sameysay tabarucaad muhiim ah horumarka taariikhiga ah ee dhowr warshado. Waxa kaliya ee hadhay hadda waa in la fadhiisto oo la fiirsado waxa ku xigi doona warshaddan bilyan-doolar ah.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka baratay macluumaad wax ku ool ah qodobkan oo aad rajeyneyso inaad uga faa'iideysan karto.
Tags: xaqiiqooyinka blogcontnet calaamadeysanqaybinta suuqgeynta waxyaabahamajaladda furrowxayeysiis hooyotirakoobka
Sharaxaad: Wax ka beddel codka adoo adeegsanaya qoraalka